२ जना कोरोना संक्रमित भेटिँदा सारा देश नै ठप्प पारेको सरकारले काठमाडौँलाई कोरोनाले ढाक्दा किन केही गर्दैन ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/२ जना कोरोना संक्रमित भेटिँदा सारा देश नै ठप्प पारेको सरकारले काठमाडौँलाई कोरोनाले ढाक्दा किन केही गर्दैन ?
२ जना कोरोना संक्रमित भेटिँदा सारा देश नै ठप्प पारेको सरकारले काठमाडौँलाई कोरोनाले ढाक्दा किन केही गर्दैन ?
काठमाडौं, २३ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहातको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले देशभरि २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित नाघे लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको निस्कर्ष निकाल्यो । मन्त्रालयले कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर ‘सीसीएमसी’लाई उक्त सिफारिश गरेको थियो । दुई सातापछि असोज २१ गते सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ ।
सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ, मन्त्रालयको सिफारिश बमोजिम लकडाउन हुन्छ त रु प्रश्नको जवाबमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “देशभरि लकडाउन गर्ने अवस्था छैन्, हटस्पट भएको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास गरिनेछ ।” प्रवक्ता ज्ञवाली कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर९सीसीएमसी०का सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा हाल करिब १४ हजार सक्रिय सङ्क्रमित छन् । उपत्यका हटस्पटको रुपमा परिणत हुँदैछ । तर हटस्पटको रुपमा परिणत भएपनि उपत्यकामा लकडाउन वा निषेधित क्षेत्र घोषणाको तयारी देखिन्न । सीसीएमसीले उक्त अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । यसअघि पनि उपत्यकामा सङ्क्रमित बढ्दा स्थानीय प्रशासनले नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यद्दपी प्रवक्ता ज्ञवालीले हटस्पट क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ताले भने – कुलमानलाई सामाजिक संजालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले छैन
आँचल र म साथी हौं, त्योभन्दा माथि केही थिएन : पल शाह
कुवेतमा थप ११ नेपालीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि